प्रहरी अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन शुरु, कति छ दैनिक उत्पादन क्षमता ? | नेपालन्युज
प्रहरी अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादन शुरु, कति छ दैनिक उत्पादन क्षमता ?
नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगञ्जमा अक्सिजन उत्पादन शुरु गरिएको छ । उक्त अस्पतालले दैनिक १४० सिलिण्डर उत्पादन क्षमताको ‘डुप्लेक्स पिएसए मेडिकल अक्सिजन जेनेरेसन सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
प्रहरी महानिरीक्षक थापा क्षेत्रीले अस्पतालले उत्कृष्ट सेवा दिने र बिरामी निको पार्ने विषयमा सबैले एकिकृत प्रयास गरी काम गर्नुपर्ने बताइ । राम्रो सेवा, असल व्यवहार र उपलब्ध साधन स्रोत तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा अझै सुधार गर्दै समूहगत रुपमा लाग्दा वर्तमान महामारीलाई परास्त गर्न सहज हुने उनले बताए ।
उक्त अवसरमा अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा आशा सिंहले अस्पतालबाट भए गरेका काम कारबाही र उपचारको अवस्थाबारे जानकारी गराईन् ।
आजको राशिफल, हेनूस् तपाईको दिन कस्तो रहन्छ ?
घरेलु मैदानमा न्युकासलसँग लेष्टर पराजित